ပြင်သစ်တွင် "Espérer" conjugation ဘယ်လိုရှိပါသလား?
(မျှော်လင့်ခြင်းမှ) "Espérer" Conjugate လုပ်နည်း
သင်ဟာအဲဒီပြင်သစ်ကြိယာ conjugation Learn ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် "မျှော်လင့်ခြင်း" Have
သင်ကြိယာespérerကိုသုံးပါ, ပြင်သစ်တွင် "မျှော်လင့်ပါတယ်ဖို့" လို့ပြောချင်တဲ့အခါ။ ထိုကဲ့သို့သော "မျှော်လင့်" သို့မဟုတ်အဖြစ်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်တင်းမာနေကြောင့်အသွင်ပြောင်းနိုင်ရန်အတွက် "မျှော်လင့်," သင်က conjugate ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီတစ်ခုစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်တစ်နည်းနည်းဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့တစ်ဦးအမြန်သင်ခန်းစာအရိုးရှင်းဆုံးနှင့်အများဆုံးအသုံးဝင်ကြိယာပုံစံများအားဖြင့်သင်တို့ကို run ပါလိမ့်မယ်။
ပြင်သစ်ကြိယာ conjugation သူတို့အင်္ဂလိပ်လိုကြသည်ထက် ပို. ရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြသည်။ အင်္ဂလိပ် -ing သို့မဟုတ် -ed တူသောအနည်းငယ်နောက်ဆုံးတွင်ကိုအသုံးပြုသည်အဘယ်မှာရှိ, ပြင်သစ်အဆုံးသတ်အသစ်တစ်ခု infinitive လိုအပ်ပါတယ် တိုင်းဘာသာရပ်နာမ်စားဘို့ အဖြစ်ကြိယာအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှတင်းမာနေ။
Espérerတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ပင်စည်-ပြောင်းလဲနေတဲ့ကြိယာ နှင့်အဆုံးသတ်ကြောင်းအများဆုံးကြိယာ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအောက်ပါအတိုင်း - e_er ။ ယေဘုယျအားဖြင့်သင်ျခြိုငျးတှငျး E ဖို့ရာအတွက်စူးရှéပြောင်းလဲမှုပုံစံများကိုထွက်သည်ကိုကြည့်သင့်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, တင်းမာနေအနာဂတ်၌, ဖြစ်စေသံပြောင်းပြ '' အီး '' ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ကြောင်းအသေးအဖှဲထက်အခြား (သို့သော်အရေးကြီးသော) စာလုံးပေါင်းပြောင်းလဲမှု, espérerကိုအသုံးပြုသည် ပုံမှန် -ER ကြိယာကဲ့သို့တူညီသောနောက်ဆုံးတွင် ။ ရိုးရှင်းစွာအကဤပုံစံများကိုလေ့လာရန်ဤစားပွဲပေါ်မှာအတွက်သင့်လျော်သောတင်းမာနေအတူဘာသာရပ်နာမ်စားကိုက်ညီမှုမရှိပါ။ ဥပမာအားဖြင့် "j'espère" "nous espérerons" သို့မဟုတ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် "ကျနော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်" ဟုနေစဉ်ဖြစ်ပါတယ် "ကျွန်မမျှော်လင့်ပါတယ်" "nous espèrerons။ "
အဆိုပါဖွဲ့စည်းရန် အများကိန်း espérer၏, add - ကြိယာကို stem မှပုရွက်ဆိတ်။
ဒါကကြိယာကျော်လွန်အသုံးဝင်သောနိုင်ပါတယ်သောစကားလုံးespérant, ဖန်တီးပေးပါတယ်။ အချို့သောအခြေအနေများတွင်ကနာမဝိသေသန, gerund, ဒါမှမဟုတ်နာမ်ဖြစ်လာသည်။
အတိတျ participle နှင့် Pass တေးရေးဆရာ
အဆိုပါမစုံလငျအပြင်, သငျသညျကိုလညျးသုံးနိုငျ Pass တေးရေးဆရာ အတိတ်တင်းမာနေပွငျသစျထဲတွင် "မျှော်လင့်" ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့။ ဒါကြောင့်လုပ်နေတာသောအခါ, conjugate အရန်ကြိယာ avoir ထို့နောက် add, အတိတ် participle espéré။
ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်ဖြစ်ပါတယ် "ကျနော်တို့မျှော်လင့်" နေစဉ် "j'ai espéré" ဖြစ်ပါတယ် "ကျွန်မမျှော်လင့်" "nous Avon espéré။ "
သူတို့အလွတ်ကျက်ဖို့espérer၏အရေးအပါဆုံး conjugation များမှာနေစဉ်, သငျသညျအပြင်အနည်းငယ်ပိုပြီးအထောက်အကူဖြစ်စေတွေ့ပါလိမ့်မည်။ ဥပမာ, အခါကြိယာရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုဖြစ်စေ, မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ပါတယ် ပု subjunctive ကြိယာစိတ်ဓါတ်များ သို့မဟုတ် ယင်းအခြေအနေအရပုံစံ သင့်လျော်သောဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သငျသညျပြင်သစ်တွေအများကြီးကိုဖတ်လျှင်, သင်တို့ကိုဖြစ်စေကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်ဟုဖွယ်ရှိရဲ့ ပု Pass ရိုးရှင်းတဲ့ သို့မဟုတ် ယင်းမစုံလငျ subjunctive ။ ဤရွေ့ကားစာပေအတွက်ဘုံဖြစ်ကြပြီးသူတို့အသိအမှတျပွုနိုငျရနျအကောင်းတစ်စိတ်ကူးပါတယ်။
အဆိုပါအလွန်အရေးကြီးသည်ကြိယာပုံစံကို မြန်ဆန်မကြာခဏမှနျကွောငျးဝနျခံသောထုတ်ပြန်ချက်များသို့မဟုတ်အာမေဍိတ်ဖွဲ့စည်းရန်အသုံးပြုသည်။ ဒီတစ်ခုသုံးပြီးသောအခါ, ဘာသာရပ်နာမ်စားကိုကျော်သွား။ အဲဒီအစားတစ်ဦးတည်း "espère" ကိုသုံးပါ "tu espère" ဟုထက်။
"Déjeuner" (နေ့လည်စာဖူးမှ) Conjugate လုပ်နည်း
ပြင်သစ် preposition '' က de '' အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို: ဒါဟာအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
မှန်ကန် Irregular စပိန်အတိတ်မှ participle ဖွဲ့စည်းခြင်း
အီတလီကြိယာ conjugation: 'Spedire' '
အီတလီကြိယာ conjugation: Offrire
Preposition ပြီးနောက် Infinite အသုံးပြုခြင်း
ဂျာမန်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ Pronoun '' Es '' အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
အဆိုပါလက်ရှိ perfect tense အသုံးပြုခြင်း
ရိုးရှငျး "ပေးအပ်ခြင်း" (Give မှ) ပြင်သစ်ကြိယာ conjugation
မွေးမြူရေးခြံစတိုင်အိမ်စီမံကိန်းများကို 1950 ကနေ
2013 ခုနှစ်အတွက်ထိပ်တန်း 10 ကျောင်းဆင်းပွဲသီချင်းများ
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: M1 Garand ရိုင်ဖယ်
2012 တိုယိုတာ Tacoma ပစ်ကပ်ထရပ်ကားများ
အဆိုပါအစာအိမ်၏ pH ဟာဘာလဲ,
Rockerz®ပုံစကိတ် Blade ကိုစောင့်၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: စစ်ဆင်ရေး Lila & ပြင်သစ်ရေယာဉ်စု၏ Scuttling
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနေ 21 နိုဘယ်လ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု Winners
အကောင်းဆုံးနှင့်အဆိုးဆုံးတက္ကဆက် Poker လက်စွဲစတင်ခြင်း '' em Hold
နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု / နိုင်ငံခြားရေးတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏အဓိပ္ပာယ်
Frank Lloyd Wright ရဲ့အိမ်ကနေစိတ်ကူးများတင့်တယ်
ရေပိုက်ကနေရေသောက်ရန်ဒါဟာကို Safe ဖြစ်သနည်း